Fampiharana ny tena vidiny : nihena -150 Ar ny litatry ny lasantsy | NewsMada
Manaraka ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eran-tany koa ny eto amintsika. Na izany aza, tsy fantatra raha tena mifanandrify amin’ny tena vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena tokoa, sady tsy ahazoana fanazavana rahateo izany.
Nidina! Nihena ho 3.550 Ar ny litatry ny solika SP 95, nanomboka , omaly, raha 3.700 Ar teo aloha. Izany hoe, nisy fihenany -150 Ar (-4%). Ho an’ny gazoala, nidina ho 3.090 Ar/l ny vidiny raha 3.170 Ar teo aloha (-80 Ar na -2,52%). Lasa 2.320 Ar/l kosa ny solitany fandrehitra raha 2.380 Ar/l tany aloha (-60 Ar; -2,5%).
Indroa nidina ny vidin’ny lasantsy tato anatin’ny iray volana sy tapany (farany ny 24 novambra 2015). Tsy nitovy ny fihenany satria -150 Ar tamin’ity farany raha -30 Ar ny voalohany. Niakatra kosa ny gazoala ny volana novambra (+20 Ar) ary nihena -80 Ar izao farany izao. Tsy niova firy ny an’ny solitany fandrehitra, nidina -30 Ar tamin’ny novambra ary -60 Ar tamin’ity farany ity.
Tsy mitovy amin’ny fihenany eo amin’ny tena tsena
Raha raisina amin’io fiovaovany eto amintsika io, tsy mitovy ny taha eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Raha atao salanisa ny fihenany eto Madagasikara, manodidina ny -2,6% ireo karazan-tsolika telo ireo. Eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, tafidina ho 30 dolara ny iray barila ankehitriny raha 45 dolara tamin’ny faramparan’ny taona 2015, izany hoe, nihena -33% be izao.
Marina fa tsy hanaiky io fampitahana io ny teknisianina amin’ny vidin-tsolika, satria singa iray mamaritra ny vidin’ny barila. Singa faharoa ny sandan’ny dolara (ividianana azy any am-potony) miohatra amin’ny Ariary. Ary singa fahatelo ny saram-pitaterana. Eo koa ny hetra sy ny haba samihafa, toy ny Tahiry hikojakojana ny lalana (Fer). Na izany aza, mifanalavitra ny tarehimarika na ny taha.
Tsy manazava ny OMH
Milaza ny fanjakana fa ampiharina ny tena vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, tsy manampy ara-bola ny mpandraharaha intsony ny fanjakana. Mahavariana anefa fa tsy afaka mamaritra ny vidin-tsolika ny avy amin’ny mpandraharaha, sady mitovy avokoa ny vidiny ampiharina amin’ireo kaompania efatra eto Madagasikara. Voalaza fa miandraikitra ny famaritana ny vidin-tsolika ny sampandraharaham-panjakana ny Ofisy Malagasy misahana ny vokatra ara-tsolika (OMH), saingy tsy milaza ny antsipiriany sy tsy manazava ny antony vidiny avoakany izy ireo na indray mandeha aza.